ZAGANAR | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
Photos To Remember Zaganar (ဇာဂနာ အမှတ်တရ၊ ဇာဂနာ ဓာတ်ပုံများ) December 13, 2010
Filed under: PHOTOS,ZAGANAR — Nyo Gyi @ 7:14 am
ဇာဂနာ အမှတ်တရ၊ ဇာဂနာ ဓာတ်ပုံများ
အာဏာရှင်များ၏ မတရားသော အမိန့်အာဏာဖြင့် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံထားရသော အမျိုးသားလူရွှင်တော်ကြီး ဇာဂနာ၏ ဓာတ်ပုံများကို အမှတ်တရ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံများကို Feb 27, 2010 ကတည်းက Picasa Web Albums မှာ upload လုပ်ထားခဲ့ပေမင့် ယခုမှပဲ Share လုပ်ဖြစ်ပါတော့၏။
ဓာတ်ပုံများကို ရတီ စာပေ၊ အနုပညာ မဂ္ဂဇင်း၊ The Yati Magazine, Vol 2, No. 16, June 2005 မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
From Zarganar Photos From the Yati Magazine (Vol 2, No. 16, June, 2005)
FREE ZAGANAR NOW !!! August 16, 2008
လူုမှုကယ်ဆယ်ရေး စေတနာရှင်၊ အနုပညာရှင် ဇာဂနာကို စစ်နအဖက ဖမ်း June 5, 2008
Filed under: NARGIS CYCLONE,ZAGANAR — Nyo Gyi @ 1:06 am